Kedu ka Usoro Ọrụ si akwadebe m maka Mmemme | Martech Zone
Algebra abụwo isiokwu m kachasị amasị m. Enweghi otutu ozizi, naanị otu igbe ọrụ nke usoro na usoro nke arụmọrụ iji dozie. Ọ bụrụ na iru ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ị ga-echeta (nke e hotara na Math.com):
Buru ụzọ rụọ ọrụ niile dị n'ime parentheses.
Na-esote, rụọ ọrụ ọ bụla na ndị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ndị na-emegharị ahụ.
Na-arụ ọrụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri, mee mmụba na nkewa niile.
N'ikpeazụ, na-arụ ọrụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri, mee mgbakwunye na mwepu niile.
Nke a bụ ihe atụ si Math.com:
Itinye nke a na mmepe dị mfe.
Rationsrụ ọrụ n'ime nkụji ụkwụ na-emetụta peeji nke m, na usoro HTML dị mfe. M na-amalite na oghere oghere ma jiri nwayọọ nwayọọ mejupụta ya ruo mgbe ọ nwere ihe niile m na-achọ. Iji hụ na mgbanwe ọrụ onye ọrụ imewe, M na-arụ ọrụ mgbe niile na XHTML na CSS. Ebe obula onwere nkpuru okwu (ya bu, nchekwa data ma obu ihe obula putara), m na-ekwu okwu na komputa ma pinye ederede dummy, onyonyo ma obu ihe ndi ozo.
Na-esote, m na ndị ọ bụla na-akwado ma ọ bụ ndị na-eme ihe ike. Ndị a bụ mmemme m ma ọ bụ nchekwa data m nke na-ewepụ, gbanwee, na ibu (ETL) data dịka m chọrọ igosipụta na ibe m. Ana m arụ ọrụ na usoro ahụ wee wezuga ọ bụla ma ọ bụrụ na ịhazi ya na nyocha a rụpụtara na arụmọrụ ka mma.
Nke na-esote bụ ịba ụba ma ọ bụ nkewa. Nke a bụ ebe m na-eme ka koodu m dị mfe. Kama inwe otu nnukwu ederede, m nkịtị dị ka ọtụtụ koodu m nwere ike itinye gụnyere faịlụ na klaasị. Site na mmepe weebụ, m na-arụ ọrụ site n'elu ruo na ala, n'ezie.
N'ikpeazụ, na-arụ ọrụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri, mgbakwunye na mwepu niile. Nzọụkwụ a bụ usoro ikpeazụ, na-etinye tidbits ikpeazụ nke nkwado nkwado ụdị, ụdị ihe eji eme ihe, njikwa mperi, wdg. Ọzọ, m na-arụ ọrụ site n'elu ruo na ala.
Ezigbo mmepe abụghị ihe mgbagwoju anya karịa nnukwu nsogbu Algebra. Have nwere mgbanwe, akụkụ, arụ ọrụ… yana usoro ezi uche dị na arụmọrụ iji nweta nsonaazụ kacha mma. Ahụrụ m ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na naanị 'nweta ya ka ọ rụọ ọrụ' mana ị hụrụ (dịka m nwere) na ọ bụrụ na ị naghị ezube usoro gị ma were usoro ezi uche dị na ya, ị ga-ahụ onwe gị ka ị na-ede koodu gị ugboro ugboro nsogbu ma ọ bụ mgbanwe dị mkpa.
Algebra abụwo mgbe niile dị ka egwuregwu jigsaw. Ọ na-abụ ihe ịma aka, ihe ọchị, na amaara m na azịza dị mfe ga-ekwe omume. Mpekere niile dị ebe ahụ, naanị ịchọrọ ịchọta ha ma jikọta ha n'ụzọ ziri ezi. Ide ederede abụghị ihe dị iche, mana ọ na-atọkwu ụtọ n'ihi na ihe mgbagwoju anya gị bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ka ọ bụrụ!
Adịghị m onye nrụpụta, mana ọbụghị m nnukwu. Enwerem; Otú ọ dị, natara ekele na koodu m dere n'ọtụtụ ọrụ. Ekwenyere m na ihe ka ukwuu n'ime ya bụ n'ihi na m na-eme ọtụtụ nhazi, ịkwa ọcha, nhazi usoro, wdg. Tupu mụ edetu aha edemede mbụ ahụ.
Tags: ná mgbakọ na mwepụusoro nke arụmọrụmmemme
Ọkt 23, 2007 na 12:33 AM
Nke a bụ ọkwa mara mma. Ọ dịtụbeghị mgbe m chere echiche itinye usoro nke arụmọrụ n'ọrụ dị ka ihe nkịtị dị ka mmepe, mana ozugbo ị chetara ya, ị ga-ahụ na ha abụọ adịghị adị n'otu ụzọ ahụ. Aga m edenye aha nke a ma jiri ya mee ihe. ;]
Ọkt 23, 2007 na 5:36 AM
Daalụ Stephen! Ana m arụ ọrụ na nnukwu ọrụ na-arụ ọrụ ugbu a na-agafe ọtụtụ tebụl na ọtụtụ peeji na usoro ezi uche dị na ya (ihe niile jikọtara ya na otu ibe iji Ajax) ma achọpụtara m na m kpachapụrụ anya m wee kpebie ide banyere ya.